बाढीपछि फेरिएको जीवनशैली….. | Indrenionline.com
वि.सं २०७८ कार्तिक ३ बुधबार
Home Feature Breaking news बाढीपछि फेरिएको जीवनशैली…..
बाढीपछि फेरिएको जीवनशैली…..
२०७३ जेष्ठ १४ गते शुक्रबार ०१:५४ बजे
दाङ, जेठ १४ ।
विहानको सिरसिरे ववई नदिको सिरेटोसँगै कम्मरमा पिरुङ्गाें र हातमा जाल लिएर शुरु हुन्छ कपुरी वादीको दैनिकी । दाङ फुलवारी गाउँ बिकास समिति वडा नं. ६ बस्ने करिव ५० बर्षिय कपुरी परिवारका अभिभावक हुन ।
ववई नदीका किनारामा बस्दै आएका उनको एक धुर जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन । एैलानीमा बसेर आफनो जिवीका चलाइरहेका । फूलवारी ६ स्थित नेवारीकोट सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता रहेका कपुरीको परिवारले जंगलबाट दाउरा ल्याई स्थानिय बखरिया बजार र तुल्सीपुरसम्म लगेर बेच्ने गर्दथे । पुरानो च्यातिएको जाल मर्मत गर्दै कहिलेकाहि बबई नदिमा जाल हानेर माछा मार्ने काम गरेर जेनतेन जीवन निर्वाह गरेका थिए ।
हुनेहार दैव नटार भने झै उनको परिवार लगायतका त्यहाका करिव ७७ घर परिवारलाई २०७१ साल श्रावण ३० गते ववई नदिमा आएको वाढीले घर बगायो । शरिरको बाहेक अरु केहि बचाउन सकिएन—उनले ।
बाढीले बिपत्तीमा पारेको एक बर्षसम्म उनीहरुले जसोतसो जीवन काटे । त्यस लगत्तै बिभिन्न निकायबाट सहयोग पनि पाउन थाले बाढी पिडितले । त्यही सहयोगबाट कपुरीको जीवनमा थोरै भएपनि परिवर्तन आएको छ । पहिले दाउरा बेचेर जीवन जीवन बाध्य कपुरीको जीवन जीउने बाटो अहिले फेरिएको छ । अहिले उनी माछा बेचेर आउने पैसाले जीवन जीइरहेका छन ।
“अहिले त जीवन नै फेरिया जस्तो भएको छ—कपुरीले भने—दुख त छ तर सजिलरी खाएका छौ ।” केएर नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङको साझेदारीमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम अन्तरगत जीविकोपार्जन सुधार योजना सहयोग कार्यक्रमबाट कपुरी लगायत फूलबारीका ३२ बिपन्न घरधुरीले सहयोग प्राप्त गरेका हुन । कपुरीले पनि अरुले जस्तै १५ हजार रुपैया सहयोग पाएको र १५ हजार रुपैयाले माछा मार्ने जाल किनेर ब्यावसायिक रुपमा जस्तै माछा मार्ने काम शुरु गरेको बताउछन ।
“त्यही सहयोगले मलाई रार्मै भा छ, माछा मारेर नजिकैको बखरिया बजारमा लैजान्छु दैनिक पाँच देखि सात सय रुपैया हुन्छ —कपुरीले भने— भने जति माछा दिन सकेको छैन ।” उनका अनुसार ववई नदीमा पाईने लोकल माछाको निकै माग छ ।“साहु महाजनबाट कारेको रिन पनी विस्तारै तिर्दैछौ, पहिला घर थिएन घर पनि बनायौ भाडाकुडा कपडा सबै किनीयो—कपुरीले भने —नातिनतिना लाई स्कुल पढाउन थाल्यौ” ।
सामुदायिक वन समूहको सिफरिसमा हरियो वन कार्यक्रमबाट सहयोग पाउने फूलवारीको बखरिया टेक्सीपार्कमा रहेको खीमा खत्रीको किराना खुद्रा पसलपनि निकै चलेको छ । खीमाका श्रीमान रोजगारीकालागि भारतमा छन । १५ हजार अनुदान पाएपछि पसल थालेकी खिमाले अहिले दैनिक तीन सय रुपैया जति बचत गर्ने बताउनुहुन्छ । “मान्छेको जातलाई पुग्न त पुग्दो रैनछ—खीमाले थपिन—म त खुशी नै छु, पसलबाट आएको पैसाले छोरीलाई बोडिङमा पढाएकी छु” । आफना् परिवारलाई बबइ खोलामा आएको बाढीले उठीबास लगाएपछि शुरुमा दुख भएपनि सहयोग पाउदै गएपछि सजिलो भएको खीमाको भनाई छ ।
कपुरी र खीमा मात्रै होइन बखरियाका सन्चलाल चौधरीले पनि सहयोग पाएपछि चिया पसल खोलेका छन । बिहान उनको पसलमा चिया खानेको लर्को नै लाग्छ । देनिक खर्च कटाएर दुइतीन सय बचत गर्ने गरेको सन्चुलाल बताउछन । कपुरी, खीमा र सन्चलाल जस्तै फूलवारीका धेरै बिपन्न बर्गका वनका उपभोक्ताहरु सहयोगलाई सदुपयोग गरी ब्यावसायीक बन्दै छन ।
फूलवारी गाविसको नेवारीकोटा सामुदायिक वन समूहका २५ र जनकल्याण सामुदायिक वन समूहका ७ गरी ३२ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले कार्यक्रम अन्र्तगत अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको वन महासंघ दाङका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अकल्पनिय बाढीबाट पिडितहरुलाई आफूहरुले साझेदार निकायसँग पहल गरी सहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले सहयोगलाई सदुपयोग गरी उपभोक्ताहरु ब्यासायिक वन्दै गएकोमा खुशी ब्यक्त गर्नुभयो ।
Previous articleमृत्यु शैयामा छटपटाउदै पत्रकार छत्र परियार, कस्ले देला उनलाई जीवनदान ??
Next articleरावतद्धारा जन्मदिनमा विद्यार्थीलाई सहयोग